Wozani ngobuningi benu eMadimeni | News24
Wozani ngobuningi benu eMadimeni
Isithombe: nosipho Mkhize Umhleli womcimbi uPhilani ‘Mapensa’ Khumalo nomculi waseMolweni uLindokuhle ‘Cheesenator” Bhengu.
UMCULI waseMolweni uLindokuhle ‘Cheesenator’ Bhengu (24) ocula uhlobo lomculo we-hip hop ne kwaito umema wonke amalungu omphakathi emcimbini onesiqubulo esithi: “Home Coming” ozobe usenkundleni yeze midlalo eMadimeni Sports Ground ngoMgqibelo Mhla ka-21 kuLwezi (November) ngo-10 ekuseni kuya ku-6 ntambama.
Uthe: “Lo mcimbi ngiwuhlelele umphakathi engisuka kuwo ngenhloso yokuthi bebone ithalente lami ukuze bengazisoli ngokungi votela kuma Live Your Dream Awards.
Sengenze imicimbi ezindaweni ezahlukene KwaZulu-Natal. Kulo mcimbi oseMadimeni kuzobe kukhona abanye abaculi nosaziwayo kubalwa uFiso, uMampensa, uMsawawa, uHeavy Weight, uNtuli Zebhasi, The Booster, Casman, GBDB, Army G, uMkhosi, uShadow, uTattoo, uLove Devotion, uJavas, Izinja Zetheku u-Dj Flopzin no-Lil Boy we-Vibe Fm, uNkulumo, uMafungwase weNanda Fm nabanye.”
Iphephandaba iFEVER like lashicilele ngaphambilini ngokuthi lensizwa isukaphi.
ULindokuhle udume kakhulu ngomculo we-hip hop ne-Kwaito futhi umculo wakhe usumbeke emathubeni okuba ngomunye wabaculi abavelele njengoba eqokwe kuma-Live Your Dream Awards esigabeni se-Best New Comer.
Njengoba leli bhungu lihlele umcimbi endaweni asuka kuyo lithe ufuna ukubonisa umphakathi ukuthi kungani kumele umvotele.
Lo mculi ukholelwa ekutheni baningi abantu abane thalente eMolweni, kuphela nje umphakathi kumele ubambane ngezandla ulekelelane ukuze libonakale eNingizimu Afrika namaphethelo.
ULindokuhle uzalelwe eNkandla wasuka khona eneminyaka eyi-7 ubudala.
Uthe: “Ngihlale eNkandla isikhashana kwathi sengineminyaka eyi-7 ngahlala eMadimeni.
Ngifuna umphakathi uthokozele umculo wami njengoba sengisebenze kanzima ukuhlela lo mcimbi lapho bezobona ukuthi nginethalente elingakanani.
Kulo mcimbi ngizobe ngihamba nabaculi abaningi kanye nabasakazi be-Vibe Fm nabe Nanda Fm,” kusho yena.
“Njengoba ngiqokiwe kulama-awards kusho khona abalibonile leli thalente futhi lokho kuyangigqugquzela ukuba ngiqhubekele phambili.”
ULindokuhle uthe ugxile kakhulu emculweni emva kokubona ukuthi intsha eningi emphakathini igxile otshwaleni.
“Ukukhulela endaweni ese makhaya akungivimbanga ukuba ngilandele iphupho lwami.
Ngazitshela ukuthi ngifuna ukwenza okuhlukile emphakathini ukuze ngingangeni ezidakamizweni ezingekho emthethweni naso tshwaleni. Umculo ungenza ngiqoqeke ngiziphathe kahle.
Ngisho ngisakhula ngangingenela amaqembu adansayo ukuze ngingazitholi sengenza izinto eziphambene nomthetho.
“Umculo uyimpilo yami ngoba akukho okunye okungenza ngijabule njengomculo. Ngizizwa ngikhula mihla yonke emculweni ”
Uphethe ngokuthi intsha kumele ikholelwe kukho konke ekwenzayo. “Umuntu kumele enze okuhle futhi kumele alandele iphupho lakhe.
Konke okwenzayo empilweni kumele kwenzisise ukuze ngelinye ilanga uzothola umvuzo omuhle ngalokho oyobe ukutshalile.
Yingakho isisho sithi uvuna okutshalile.
“Wozani ngobuningi benu nizothokozela umcimbi ozobe useMadimeni Sports Ground.
Ithikithi libiza u-R20 kubantu abadla bese izingane kuba u-R10.
Siyabonga kwabakwa-Waterfall Spar nabakwa-Siyabonga Foundation ngokusixhasa.”
Uma kukhona othanda ukwazi kabanzi ngoLindokuhle Bhengu shayela inombolo ethi: 083 738 8741.